Iindaba-Umbala kunye neChem Pakistan EXPO
Umbala kunye neChem Pakistan EXPO
Umbala kunye neChem Expo ngumnyhadala wokubonelela ngeenkonzo ezibanzi nezikumgangatho ophezulu kwiikhemikhali, idayi nakwimizi-mveliso emanyeneyo yokuseka uphawu, ukuphuhlisa iimarike ezintsha kunye nokuqhuba ukuthengisa. Umbala kunye neChem Expo 2019 ikwanika ukuqonda kumathuba oshishino avelayo ala macandelo. UFinging uthathe inxaxheba kule EXPO amatyeli amane. Kwintlanganiso yababonisi, u-Foring wenza intetho malunga neSalfure yokuThengiswa kweMarike eMnyama ngo-2020. Le ntetho yathetha ngohlalutyo lomzi mveliso weSulfure ngengeniso, imimandla, uphuhliso, isabelo kunye notyekelo.
Isalfure emnyama inezibonelelo ezininzi. Iimpawu ezintle zokukhawuleza, ukusebenza kweendleko kunye nokwenza lula kokusebenza phantsi kweemeko ezahlukeneyo zokulungisa, ukuqhubeka okuqhubekayo kunye nokuqhubekayo kuyenze ibe yenye yezona zinto zidume kakhulu.
Umlinganiswa ophakamileyo wexabiso lobuchwephesha, ukunyibilika okuhle kunye nokungena okungcono
Ukusebenza kwedayi ekumgangatho ophezulu, ukwakha okuphezulu kunye nokungaguquguquki komthunzi
Iipropathi ukukhanya okuphezulu, ukuhlamba kunye nokubila ukukhawuleza. I-crocking esemgangathweni kunye nokungxama kwe-Chlorine engalunganga (kuluncedo ekuhlambeni i-Denim)
Ukuqhubela phambili, ukhetho olubanzi lokukhetha iintlobo ezahlukeneyo eziqhelekileyo, i-leuco kunye nefom solubilised yeyona nto iphambili inegalelo kubukho obuqhubekayo kunye nemfuno ekhulayo yeli klasi le-dyestuff. Ngo-2010, kunye neCAGR - 3.8%. Kwimarike yehlabathi, i-Sulphur Dyes kulindeleke ukuba inike ingxelo malunga ne-6%.
Imifanekiso yokuqala ibonisa ukuba i-Foring vice-president ifumana imodeli yokubonisa indebe eboniswe ngumququzeleli ngo-4th Umbala kunye neChem ExPO. Umfanekiso wesibini ubonisa ukuba u-5th Umbala kunye neChem Expo iindwendwe ziza kumnquba wethu.
Umbala we-4 kunye neChem Pakistan EXPO 2018
Umbala wesihlanu kunye neChem Pakistan EXPO 2019
Ixesha Post: Jul-31-2020